Ywar Thar Lay (YTU): 8/1/09
Yor are my number one
'Cause baby, you're my #1
But I still haven't seen anything
Posted by Anonymous at 1:45 PM 26 comments Links to this post
မင်္ဂလာလှည်း မှသည် အုတ်တင်ပွဲ
ဆရာမခငျခငျထူးရဲ့ မင်ျဂလာလှညျးကို ကိုအောငျဖွိုးရဲ့ အညှနျး၊ ကိုရုပျဆိုး ကုသိုလျကောငျးမှုနဲ့ ဖတျခဲ့ရပါတယျ။ အညာဒသေရဲ့ အငှအေ့သကျတှနေဲ့အတူ ကနြော့ကွုံခဲ့ဖူးတဲ့ အုတျတငျပှဲလေးကိုလညျး အရိပျထငျလာမိခဲ့တယျ။
ကနြျောခုနှဈတနျးစာမေးပှဲဖွအေပွီးမှာပါ။ ဖအေ့လုပျထဲက ကိုရနျနောငျစိုး တဈယောကျ စကျရုံပေါငျးစုံအားကစားပွိုငျပှဲကို သှားရငျးက ခွောကျမွို့သူတဈယောကျနဲ့ မတ်ေတာမြှခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါမွို့သူကလညျး ဌာနထဲက ဦးတငျဝငျး အမြိုးသမီးရဲ့ ညီမဖွဈနပွေနျတယျ။ သှားရငျးလာရငျး ငွိစှနျးခဲ့ဟနျတူပါရဲ့။
မိသားဖသားပီပီ အုတျတငျမင်ျဂလာနဲ့ လာရောကျတောငျးရမျးပါဆိုတဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြကို ရခဲ့တဲ့နောကျ ကိုရနျနောငျစိုးတဈယောကျ တဈကယျ့ကို ပီတိတှေ ဂှမျးဆီထိတော့တာပါပဲ။ အညာအရပျမှာ ငှကျပြောပှဲ အုနျးပှဲနဲ့ တငျတောငျးတာကို အုတျတငျတယျလို့ ချေါကွပါတယျ။ အသေးစိတျမရှငျးပွနိုငျတာကိုတော့ (ကနြော့ ဗဟုသုတ မပွညျ့စုံမှုအဖွဈ)့ ခှငျ့လှတျပါခငျဗြာ။ အဈကိုရော အဈမရော လိုကျတောငျးပေးပါတဲ့။ အုတျတငျအခနျးအနားကို လငျစုံမယားဖကျ တကျကွရတယျတဲ့။ ဦးတငျဝငျးတို့ တဈစုံတှဲ၊ ဖတေို့မတေို့ တဈစုံတှဲ ပေါငျးပွီးသှားရောကျ တောငျးရမျးကွမယျဆိုပါတယျ။ ဆိုတော့…
နှရောသီကြောငျးပိတျရကျကလညျး ဖွဈပွနျ ခွောကျမွို့ကိုလညျး မရောကျဖူးတာမို့ ကနြျောလညျး ကနျ့လနျ့ ကနျ့လနျ့လိုကျခဲ့တော့တာပါ။ စကျရုံက ကားကွုံနဲ့ မကှေးကို လိုကျဖို့ မနကျငါးနာရီကို ဂဂြီဂဂြောငျနဲ့ ထခဲ့ရတယျ။ မနကျစောစောထဖို့ အမွဲပငျြးရိနကွေမို့ပါ။
မကှေးကနေ ခွောကျကိုတော့ ထှကျခါနီး ကားဂိတျတဈခုကနေ ကမနျးကတနျး လကျမှတျဝယျပွီး ပွေးတကျခဲ့ကွတယျ။ ဂှေးခြိုအထိက မကှေး-ကြောကျပနျးတောငျးလမျးအပိုငျး ထဲပါနတောမို့ ကနြျောသှားနကွေခရီးတဈခု ဖွဈနခေဲ့ပွီ။ ဂှေးခြို ဓါတျဆီဆိုငျလမျးခှဲမှာ ကားခဏရပျပါတယျ။ ခွောကျ၊စလေ သှားမယျ့ လမျးနဲ့ ကြောကျပနျးတောငျးသှားမယျ့ လမျးအခှဲနရောပေါ့။ ကွကျလညျခြောငျးရိုးကွျောတှေ ဝယျစားခဲ့တာ အမှတျရမိပါရဲ့။
ဟိုဘကျလမျးခှဲမှာတော့ အညာနှပေီသစှာ ခွောကျသယောငျးနခေဲ့ပွီ။ ထနျးပငျတှနေဲ့ ထနျးလကျြကြိုတဲတှဆေီက မီးခိုးငှတှေ့ေ တဈခကျြတဈခကျြ လနေဲ့အတူပါလာတတျတဲ့ ထနျးရညျအနံ့တှေ နဲ့ တဈလမျးလုံးပွညျ့နှကျနခေဲ့သညျလေ။ လမျးအပိုငျးကတော့ တကယျ့ ပီဘိလမျးကဉျြးငယျသာသာ။
ရောကျလိမျ့နိုး ရောကျလိမျ့နိုးနဲ့ ဟိုတဈကှလေ့ညျး မရောကျ ဒီတဈကှလေ့ညျး မရောကျ။ အေးစတေီအရငျလား GTI အရငျလား မမှတျမိတော့ပါ။ ခွောကျမွို့ဆိုငျးဘုတျကို ကြျောတော့ မွို့ကွီးရယျမို့ ညာဘကျကွညျ့လိုကျ ဘယျဘကျကွညျ့လိုကျ အလို တောငျကုနျးတှခေညျြးပါလား ဟရို့။ တောငျကုနျလေးတှရေဲ့ ခပနျးလေးတှမှော အိမျလေးတှေ ဟိုနားတဈစု ဒီနားတဈစု။ ခငျြးပွညျနယျလိုဘာလိုလို။
နောကျတော့ သတို့သမီးအိမျကို အရငျဝငျကွတယျ။ လူကွီးတှတေညျးဖို့ ဆိုပွီး တောငျထိပျဆုံးက အိမျလေးမှာ သီးသနျ့ထားပါတယျ။ တကယျ့ကို အိမျက ထိပျဆုံးမှာပါ။ အိမျကနကွေညျ့ရငျ ခွောကျစကျရုံကိုတောငျ မွငျရသေးရဲ့။ ဟိုတဈဖကျကမျးလညျး လှမျးမိခဲ့တယျ။
ညနခေငျးမှာတော့ ခွောကျမွို့ရဲ့ နာမညျကြျော ခေါကျဆှဲသုတျဆိုငျကို ပို့ပေးတယျ။ ပွီးတော့ ဖသေူ့ငယျခငျြး ဦးမွငျ့အောငျတို့ ဆီကို သှားလညျကွတယျ။ ဦးမွငျ့အောငျက နိုငျငံခွားထှကျမယျဆိုပွီး အလုပျက ထှကျသှားခဲ့တာ။ အဲ့ကတညျးက ကှဲသှားကွတဲ့သူတှပေေါ့။ နိုငျငံခွားဆိုတာ လယောဉျဂိတျမှာ ခွခေပြွီးပွနျလာခဲ့ရတဲ့ သူ့အတှအေ့ကွုံကို ပွောရငျး တဝါးဝါး တဟားဟား ဖွဈနကွေတာ။ အဲ့အိမျက ပွနျတော့ မိုးအတျောခြုပျနပေါပွီ။
နောကျနမေ့နကျ မင်ျဂလာဆောငျ အခမျးအနားကို ပွငျဆငျကွပွီ။ သတို့သမီးရဲ့ အမြိုးတှကေ အုတျတငျမယျ့ အုနျးပှဲငှကျပြောပှဲတှေ ခေါငျးပျေါမှာ ရှကျပွီး ဝတျကောငျးစားလှတှနေဲ့။ အညာနှပေူပငျမယျ့ သူတို့တှကေို မထိသလိုပါပဲ။ တနျးစီးပွီး ဝငျကွဖို့ အရေး အပွငျဖကျမှာလညျး တအုနျးအုနျးတရုနျးရုနျး။ အိမျတှကေလညျး အသီးအသီး အသက ထှကျကွညျ့ကွလရေဲ့။
နောကျတော့ အထဲမှာ ဘိသိကျသှငျးမယျ့ ဆရာနဲ့ ဖေ။ သူ့တပညျ့တှကေ ဘိသိကျဆရာကို ပွောထားတယျတဲ့ ဆရာက ဒေါသသိပျကွီးတာလို့။ ဘိသိကျဆရာက ကွောကျရှံ့ရှံ့နဲ့ ဟုတျကဲ့ဆရာ ဟုတျကဲ့ဆရာ လုပျနတော ကနြျောက ရယျခငျြပကျကြိဖွဈနပွေီ။ ဒါတောငျဖကေ ဘိသိကျဆရာကို တဈခှနျးပဲ ပွောခဲ့တာ။ ခငျဗြား သိပျအရဈမရှညျနဲ့ ကြုပျ မနတေတျဘူးတဲ့။ သူတဈခါမှ အဲ့လိုပှဲလမျးသဘငျအခမျးအနားတှေ မှာ စငျပျေါလိုနရောကနေ မထိုငျဖူးဘူးလေ။ အခုဟာက အုတျတငျပှဲတကျလာတဲ့ အထဲက ဖတေို့စုံတှဲက သတိုးသားဖကျက ထိုငျ သတို့သမီးဖကျက သတို့သမီး မိဘမြားဆိုတော့ စငျပျေါတကျရတော့တာပေါ့။ ဘိသိကျဆရာက ကွောကျတတျတယျထငျပါရဲ့ အတိုဆုံးလေးတှေ ရှေးပွောရှာတယျ။ ပွောနရေငျး ဖမေ့ကျြနှာတကွညျ့ကွညျ့လုပျနသေေးတာ။ ပှဲပွီးပွီ ဆိုတော့ လာပွောသေးတယျ ကနြျော ပွောတာ တိုပါတယျနျောဆရာတဲ့။ ဖရေဲ့ ပွုံးစိစိ မကျြနှာကို သူက သူ့ဟောပွောခကျြတှေ သဘောကလြို့ မှတျယူသှားလောကျတယျရယျ။
လကျဖကျရညျနဲ့ စမူဆာပဲကြှေးတဲ့ မင်ျဂလာပှဲလေးပါ။ သူတို့နိုငျသလောကျပဲထငျပါရဲ့။ သာမနျဝနျထမျးမို့ ဇာပဝါ အနားတှလေညျး မခြဲ့နိုငျတော့ဘူးလေ။ သူ့အိုး သူ့ဆနျ တနျရုံ သူ့အရပျနဲ့ သူ့ဇာတျ ကိုကျတယျဆို ဗဂြေိဆိုပွီး ပှဲတဈခု ပွီးတာပါပဲ။
စိုငျးဘုနျးထူးတို့ ဝဏ်ဏခှာနီးတို့လညျးမပါ ဓါတျပုံလေး တဈပုံနှဈပုံရိုကျပွီး ပတျစာခှာ ဖြာသိမျးလိုကျကွပါတော့တယျ။ နလေ့ညျဆို ကနြျောတို့လညျး ပွနျကွရတော့မယျလေ။ သတို့သမီးအမလေညျး မကျြရညျလညျနလေောကျပွီ။
ခွောကျမွို့ကို မနှံ့စပျပဲ ပွနျခဲ့ကွရတယျ။ မနကျဖွနျဆို ဖကေ ရုံးပွနျတကျရတော့မယျ။ တကယျဆို အနားတဝိုကျလညျပတျခငျြသေးရဲ့ စလရေုပျစုံကြောငျးတော့ ရောကျခဲ့ခငျြသေးတယျ။ ဆိပျဖွူဘကျလညျး ကူးခဲ့ခငျြသေးတယျ။
စိတျသှားတိုငျးရယျ ကိုယျကလညျး ပါဦးမှလေ………….
Posted by Anonymous at 2:43 AM 37 comments Links to this post
ကျနော့ရဲ့ ၀န်ခံခြင်းတွေပါ။ ရေတွက်လို့ မရနိုင်တဲ့ အကောင်အထည်ရယ် မရှိလေတဲ့ ဒီချစ်ခြင်းဆိုတာကို ကျနော် သက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့မိပြီ။ ဒီအငွေ့နဲ့မူးမေ့စေခဲ့တာလေ။ ဒီအတွေ့နဲ့ ရူးစေခဲ့တာတွေ။ အဲ့ဒီနေ့ကမှ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရတာပါ။ မယုံဘူးလို့ ဆိုလည်း ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲနော်။
ချစ်တတ်လာတဲ့နောက် ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြောက်ရွံ့လာခဲ့မိတယ်။ ချုပ်ချယ်ခြင်းမမြည်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ရင်း။ ဒါပေမယ့်လေ စက္ကန့်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတင် ပန်းအနားကပ်တဲ့လေကို ငြိုငြင်မိတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ထွက်သက်တိုင်းမှာ ကပ်လျက်ပါလို့ ဒီအပါးမှာပဲ အမြဲနေချင်မိတယ်။
လေတိုးတာကို တစ်မျိုးထင်မိတယ်။ လေတိုက်လို့ ပွင့်ဖတ်တွေလှုပ်ရင် ပျော်ရွှင်နေသလား မေးချင်မိတယ်။ မရဲတရဲ လေတိုက်ရာ မပါစေကြောင်း လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကာကွယ်ပေမယ့် အရပ်ရယ် ရှစ်မျက်နှာမို့ မလုံခြုံစိတ်နဲ့ မချင့်မရဲ။
ပင်ခြေရင်းကိုလည်း မကြည့်ချင်။ ပင်မြင့်ထက်ကိုလည်း မမော့ရဲ။ ရွက်စိမ်းစိမ်းတွေကိုတောင် သူတစ်စိမ်းရယ် စွပ်စွဲချင်လာတယ်။ စိတ္တဇဆန်တယ်ပြောချင်ပြောပါ တကယ့်ကို အရူးမီးဝိုင်း ဖြစ်နေခဲ့တာ။ သနားမငဲ့လို့ ထားခဲ့ရက်တယ်ဆိုပေမယ့် မဝေးရဲတဲ့သူဖြစ်နေပြန်တယ်။ အတွေးနဲ့တင် စိုးထိတ်လို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိုတင်ကြေကွဲဖူးတယ်လေ။
ရက်သတ္တပတ်တွေမှာ တွေ့ရမယ့်ရက်ကို လက်ချိုးရေရင်း မျှော်လိုက်ရတာ။ အခွင့်မသာတဲ့ လမိုက်ညတွေကလည်းများ၊ ကံတရားအလှည့် ဆိုတာကလည်း ယုံတမ်းစကားလိုပါပဲလေ။ ဟင့်အင်းလို့ သူငြင်းရင် ရင်တွင်းမှာ မြှားအစင်းတစ်ရာ။ မရေရာလို့ သူဆိုရင် နေတစ်ရာပင် ပူသလိုထင်မိတယ်။
သူတစ်ကာလို မူယာတွေလည်း မပိုတတ်ပါဘူး။ အချိုသတ်ပြီး အပျော့ဆွဲနဲ့ ချော့ပွဲတွေလည်း မခင်းတတ်။ ဥစ္စာရယ် ပစ္စည်းလည်း မရှိ။ ဆန္ဒရယ် ပြည့်စေတော့လို့ ဖြည့်နိုင်စွမ်းလည်း မရှိ။ ကျနော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းဆိုတာ ကလွဲရင် ကျနော့မှာ အခြားမရှိတော့တာမို့ပါ……….
Posted by Anonymous at 11:13 PM 31 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 10:23 AM 19 comments Links to this post
ချစ်ပြုံးနှင်းဆီ ကျနော့ရင်ထဲက ပန်းနှင်းဆီ
လူတိုင်းလူတိုင်း ရင်ထဲမှာ အနည်းဆုံးတော့ ပန်းတစ်ပွင့်ဆီ ပွင့်ခဲ့ဖူးကြမှာပါ။ ပန်းလေးတစ်ပွင့် ဘယ်လိုများ ဖူးပွင့်ခဲ့ပါလိမ့်……..
စတင်သတိထားမိတာ ပန်းသီးတံဆိပ် ဖိနပ်သည်းကြိုး အမည်းရောင် လေးပါ။ သည်းကြိုးလေး ထင်းခနဲပေါ်စေခဲ့တာ အဲ့ဒီခြေဖမိုးလေးကြောင့်လို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ တကယ်လည်း ခြေဖမိုးပြင်က အပြစ်ကင်းစင်ခဲ့သည်လေ။
ပန်းနှင်းဆီနဲ့စဆုံခဲ့တဲ့ နေရာက ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် ရဲ့ အ၀ိုင်းပတ် စုံချက်နေရာမှာပါ။ အမှတ်၂ကျောင်းနဲ့ အမှတ်၃ကျောင်းက ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ကျောင်းဆင်းချိန်စုံတတ်တဲ့ နေရာတစ်ခု။
ဖီးဆင့်အစိမ်းရောင် ဘီးလေးကို သူ့အရပ်နဲ့အညီ ထိုင်ခုံလေးကို အောက်လျှော့ပြီး ခပ်သွက်သွက်နင်းတတ်တယ်။ ဆံပင်ဂုတ်ဝဲလေး တစ်ချက်နှစ်ချက်ဝဲပြီး မာန်တင်းပြီးနင်းတက်လေတယ်။ မျက်မှန်ကိုင်းမည်းမည်းလေး ကြားမှာ မျက်ဝန်းတွေမြင်ခွင့် ဘယ်သူများရကြပါလိမ့်။ နောက်က သကောင့်သားတွေ ပါမှန်းသိလို့ထင်ပါရဲ့ ဇွတ်အတင်းလို့ဖြင့် သူနင်းလေတဲ့ ပန်းနှင်းဆီ။
ဖြူလည်းမဖြူ ညိုလည်းမညို မောင်ကြီးနှမ ညက်လှပြာစင် ဒီအသွင်ဖြင့် တင့်တယ် ထင်မိခဲ့တယ်။ ပန်းပွားလွယ်အိတ် အနက်ရောင်ကြောင့်လား အင်္ကျီရယ် အဖြူရောင်ကြောင့်လား ပန်းနှင်းဆီ အငုံအပွင့်က ဂုဏ်တင့်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရေးခပ်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ ဒီမှတ်စုတိုင်းကို လူတိုင်းကလိုချင်ပါသတဲ့။ ပန်းနှင်းဆီရယ် ကျနော် စာအုပ်ငှားခဲ့တာ သူတကာလို မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ပြည့်စုံတဲ့ မှတ်စုဆိုတဲ့ ဆရာမရဲ့ မှတ်ချက်တစ်ခုတည်းကြောင့်ပါ။
ဒါပေမယ့် ပန်းနှင်းဆီက ကျနော်စာအုပ်ငှားတိုင်း ငြိုငြင်ခဲ့တယ်။ ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်လို ဆူဆောင့်ပြီးမှ မတတ်သာလို့ ပေးတတ်တဲ့ အမူအယာကို အသည်းပြင်မှာ စွဲထင်မိပါရဲ့။ နှုတ်ခမ်းတော် စူလွန်းတယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းကို စာအုပ်ငှားပြီးတိုင်း ကျနော်ဆိုမိခဲ့တယ်။
ပန်းနှင်းဆီတို့ အိမ်ရှေ့ကဖြတ်ရင် ကျနော်ငေးနေမိတာက အိမ်နံရံပေါ်က နာရီလေးပါ။ ငှက်ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ ကြိုးတန်းရှည်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကျနေတဲ့ နာရီလေးက အိမ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဘယ်အရာကမှ ဖမ်းမစားနိုင်တဲ့ အာရုံကိုပေးပါတယ်။ နာရီလေးရဲ့ နဘေးမှာတော့ ပန်းနှင်းဆီရဲ့ ပုံပန်းချီလေးတစ်ခုက အခန့်သားတည်ရှိနေခဲ့တာ။ နာရီလေးပြီးရင်တော့ ပန်းနှင်းဆီဆိုတော့ ကျနော့အတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုလိုပါပဲ။
ကိုးနာရီထိုးခါနီးတိုင်း ကျူရှင်တွေအဆင်း ဒီအိမ်ရှေ့မှာ စက်ဘီးတွေ တချွင်ချွင်မြည်တတ်ကြတယ်။ ရလေးစပေါ့တွေနဲ့ တချက်ချက်မြည်သံတွေလည်း ညံစေတတ်တယ်။ ပန်းနှင်းဆီရယ် အခြေသတင်းကြီးလွန်းပေတယ်။
အနားရယ်ကပ်လေတိုင်း ဒီပုတ်ထဲကပဲ ဒီပဲ ဒီနှယ် ထင်တတ်လေတယ်လို့ အပြစ်မတင်ရက်ပါဘူး။ ကပ်လေတိုင်းကလည်း ဒီအတိုင်းပေကိုး။ အဆောင်က အခန်းဖော်ကတောင် ပန်းနှင်းဆီရယ် ဖြစ်နေတော့မင့်ဟာ။ ကျနော့ဆီကတစ်ဆင့် တစ်ညနေ အဖော်လိုက်ပါရစေ အခွင့်တောင်းတယ် ပန်းနှင်းဆီရေ။ အနေခက်ခက်နဲ့ မျက်နှာကိုလွှဲ ပန်းနှင်းဆီအရှေ့ သွင်းခဲ့မိတယ်။
တို့ကဘယ်လို အစချီတဲ့ မာန်ပြည့်တဲ့ နှင်းဆီ တစ်ပွင့်ကို အဲ့ညနေက တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဆူးတွေကလည်း အပြည့်ပါလားနှင်းဆီရယ်။ ပင်မြင့်သလောက် အကိုင်းရှည်တယ်ကွယ်။ အကိုင်းခြေက ဆူးချက်တွေ အရိပ်ရယ် မသီဝံ့အောင် တပ်လှန့်ကြပေတယ်။
ပန်းနှင်းဆီကို မြင်လျှင်ပင်ကို ကြိုးပါလိုလည်း ဆိုတဲ့ အထဲမှာ ကျနော်မပါခဲ့ဘူး။ ပန်းနှင်းဆီကလည်း ကျနော့စိတ်ခံစားမှုကို သိခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းနှင်းဆီနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ နေခဲ့တဲ့သူကို အပင်ခြေနားဝိုင်းနေတဲ့ လူတံတိုင်းကို ဘယ်လိုမှ ကျော်မမြင်နိုင်တာ မဆန်းပါဘူးလေ။
ဒါပေမယ့် သည်ပင် သည်သို့ သည်မို့ သည်ပုံ စွဲထင်စေတဲ့ အရိပ်တွေကြားမှာ ပန်းနှင်းဆီတစ်ပွင့် ပွင့်ခဲ့ဖူးတယ်…………….
ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူတွေရဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေကို ကြည့်ဖို့အခွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
၁။ ကိုစာတိုပေစ ရဲ့ ရင်မှာပွင့်သောပန်း
၂။မရွှေပြည်သူ ရဲ့ အိပ်မက်ပန်း
၃။ အစ်ကိုအောင်သာငယ် ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက နှင်းဆီဖြူ
၄။ အမလေနုအေး ရဲ့ ကျွန်တော်ပြောချင်သော ပန်းပွင့်လေးများအကြောင်း (ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်နည်း)
၅။ ကိုဖိုးသင်္ကြန် ရဲ့ ပန်းလင်္ကာ
၆။ မအပြုံးပန်း ရဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့် ပွင့်ခဲ့ရာကစလို့
၈။အမသက်ဝေ ရဲ့ မာနကြီးသောနှင်းဆီနီ
၉။ ကိုဂျူလိုင်အိပ်မက် ရဲ့ ကနေတဲ့ မိန်းမပျို
၁၀။ မသစ်သစ် ရဲ့ ထိုသူ
၁၁။ ကိုရန်ကုန်သား ရဲ့ ချစ်ပန်းတစ်ပွင့် ပွင့်ခဲ့သည်
၁၂။ မနန်းညီ ရဲ့ အယ်ရှား စွယ်တော်ပင်နဲ့ နန်းညီ
၁၃။ ကိုခရာတွန် ရဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ပြောသော နတ်သမီးပုံပြင်
၁၄။ မကြေးမုံရဲ့ ခရေရာဇ၀င်
၁၅။ ကိုသီဟသစ် ရဲ့ စံပယ် နှင်းဆီ သဇင် (ဒီဂျေပို့စ်)
၁၆။ မကြည်ဖြူပိုင် ရဲ့ သဇင်တစ်ခက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်
၁၇။ ကိုဆောင်းချမ်းမိုး ရဲ့ ပန်းတွေဝေသော်လည်း
၁၈။ မကောင်းကင်ပြာ ရဲ့ ပိတောက်တစ်ခက်
၁၉။ ကိုပုလုကွေး ရဲ့ သင်္ကြန်ပန်း
၂၀။ မ၀ါဝါခိုင်မင်း ရဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
၂၁။ ကိုတောင်ပေါ်သား ရဲ့ ရင်ထဲကပန်း
၂၂။ မမိုးခါး ရဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်
၂၃။ ကိုလူထွေး ရဲ့ ရင်ထဲကပန်းတစ်ပွင့်
၂၄။ မမေဇင်ရဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက ပန်းရိုင်းလေး
၂၅။ ကိုလင်းဒီပရဲ့ နှင်းဆီဝင်္ကပါ
၂၇။ ကိုဖိုးဂျယ် ရဲ့ ပန်းကလေးတစ်ပွင့်
၂၈။ မအေးမြတ်မြတ်ကို ရဲ့ ကိုယ်နဲ့ ပန်းပင်လယ်
၂၉။ ကိုဗီလိန် ရဲ့ ပန်းရေးပြစီးချင်း
၃၀။ ကိုခရောင်း ရဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့် ပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆို
Posted by Anonymous at 9:41 PM 53 comments Links to this post
ထက်မြတဲ့ အသွားတွေ မလိုပါဘူး
Posted by Anonymous at 2:04 PM 17 comments Links to this post
ကိုယ်လည်း ဒီကျွန်းတစ်နေရာ သူလည်းဒီကျွန်းတစ်နေရာ။ ဘာလို့များ ခြားနားပါလိမ့်ပဲ။
ညနေရုံးဆင်းရင် ကိုယ်က အပြင်ကို ငေးခနဲ ကြည့်စမြဲ။ ရုံးခန်းတစ်ခန်းကို ဖွင့်တော့မှ ပြင်ပလောကနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြန်ရတတ်တာလေ။ ကိုယ့်ဘ၀က ထောင်နဲ့မခြားပါဆိုရင် ပြတင်းပေါက်လေးတောင် မရှိဘူးလို့ မေးကောင်းမေးနိုင်တယ်။ ပြတင်းပေါက်လေးတောင် လက်ထောက်ငေးစရာ မရှိတဲ့ဘ၀ပါလေ။
မှန်တံခါးပြီးလို့ အသားတံခါးကို ဖွင့်လိုက်ရင် ကိုယ့်အတွက် တစ်ခါတစ်ခါ သိပ်လှတဲ့တိမ်တွေ တစ်ခါတစ်ခါ မိုးသားတိမ်လိပ်တွေ တစ်ခါတစ်ခါ လျှပ်ပန်းလျှပ်နွယ်တွေ တစ်ခါတစ်ခါ မှုန်မှုန်မှိုင်းမှိုင်းတွေ တွေ့ရတတ်တယ်။ မနေ့ကဆို တိမ်တွေက သိပ်လှနေခဲ့တာ။
အိမ်ရောက်လို့ ပြတင်းပေါက်ကကြည့် မိပြန်တော့ မြက်ခင်းပြင်တစ်ခု။ အပေါ်ကိုမော့ကြည့်ရင် တစ်စင်းပြီးတစ်စင်း အတက်အဆင်းလုပ်နေတဲ့ လေယာဉ်ပျံတွေချည်း။ နေမကောင်းတဲ့ရက်ဆို အိမ်ပြန်ချင်စိတ်နဲ့ မြင်သမျှလေယာဉ်ပျံ ရွှေပြည်ကြီးကချည်းထင်နေမိတတ်တယ်။
ညနေဖက် အိမ်အပြန်လမ်းမှာ လှပတဲ့နေလုံးနီနီ။ နေ၀င်ချိန်ကောင်းကင်တစ်ခုမှာ သူတစ်လုံးတည်း ထင်တိုင်းကြဲနေတော့တာ။ မိုးသားကောင်းကင် အောက်မှာ ကျန်တဲ့အချိန်ဆို မကြည့်ရဲလို့ နေခဲ့သမျှ အတိုးချ ငေးမောရတော့တာ။ သိပ်ကိုလှတဲ့ ကောင်းကင်တစ်ခုပါလား။
ပြောမယ့်သာပြောတာပါ တစ်ချို့ရက်တွေ အိုတီဆင်းတဲ့အခါများ နေလုံးကြီးထားလို့ တိမ်မျှင်တစ်မျှင်တောင် မြင်ရဖို့ ခက်ခဲလွန်းတယ်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနဲ့ ကောင်းကင်ပြင်ကိုတောင် မော့မကြည့်ဖြစ်တဲ့ နေ့တွေ ရှိကောင်းရှိရဲ့။
ညနေတွေသည် ကွဲပြားလျက်ရှိပေသည်။ ကိုယ့်ညနေသည် ကိုယ့်ညနေသာ ဖြစ်၍ သူ့ညနေသည် သူ့ညနေသာ ဖြစ်နေပြန်သည်။
Posted by Anonymous at 2:20 PM 18 comments Links to this post
စာရေးဆရာမတစ်ယောက်က ရေးဖူးတယ် မြေအောက်ဘူတာရုံတွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မြင်ကွင်းတွေကို ကြည့်ဖို့ အခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးသွားရသတဲ့။
မနေ့က တွေးနေမိခဲ့တယ်။ မြေအောက်ဘူတာရုံရဲ့ အပြင်အဆင်တွေကိုကော ကျနော် သတိထားကြည့်ခဲ့ဖူးပါသလား။
အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတစ်ခုမှာ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အကြောင်းလေး အမှတ်ရမိသေးတယ်။ မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါ မင်း ခရီးသွားရင် (ကား၊ ရထား ဒီနှစ်ခုက လူသုံးများတယ်) ၁။ မင်းစာဖတ်လေ့ရှိသလာ;။ ၂။ မင်းသီချင်းနားထောင်သလား ၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်သလား။ ၄။ ဒါမှမဟုတ် မင်းအိပ်သလား။ ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ အဖြေက ဘယ်နံပါတ်မှာ များမယ်ထင်သလဲ။
စတင် သတိထားမိတာက အ၀ါရောင်ဘူတာရုံပါ။ ဘူတာရုံတစ်ခုလုံး အ၀ါရောင်သုတ်ထားခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဘာအတွက်လဲ ဒီအရောင်နဲ့ ဒီဘူတာရုံ ဘယ်လိုစပ်ဆက်သလဲ။ ဘူတာရုံ အ၀ါရောင်မှာ ကျနော်ဘယ်လိုခံစားမိခဲ့သလဲ။ ကျန်တဲ့သူတွေကော ဘယ်လိုခံစားမိသလဲ။ ကျနော်သိချင်မိတယ်။
ဒုတိယဘူတာရုံကတော့ အစိမ်းရောင်ဘူတာရုံပါ။ သူ့ကို အစိမ်းရောင်သုတ်ထားမထား ကျနော်မသေချာပေမယ့်။ ကျနော့စိတ်ထဲမှာ အစိမ်းရောင်လို့မှတ်ထားမိခဲ့တယ်။ အစိမ်းရောင်ဘူတာရုံကို မီးခိုးရောင်ကောင်းကင်နဲ့ ကြည့်ရတာ တစ်မျိုးတော့အဆန်းသား။
နောက်ထပ်မှတ်မှတ်ရရဖြစ်စေခဲ့တာ အဖြူရောင်ဘူတာရုံပါ။ သူ့ကိုတော့ ကျနော်သိပ်ကြိုက်တဲ့ လသာဆောင်လေးကနေ ထိုင်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာ။ လူတွေ ရထားတွေ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေသလို ကျနော့ကိုလည်း အတက်အကျခံစားမှုတွေ ပေးခဲ့တယ်လေ။ အဖြူရောင်ဘူတာရုံလေးက မိုးရေတွေကြားမှာ လွမ်းနေအောင် အချွဲပိုသွားခဲ့သေးတယ်။ ကျနော်လည်းချမ်းနေခဲ့တယ်။
ရထားသံလမ်းဘေးမှာ ရပ်နေရင်း စိတ်အာရုံတွေပျံ့လွင့်နေခဲ့တယ်။ တစ်စင်းပြီး တစ်စင်းဖြတ်သန်းသွားကြတဲ့ ရထားတွေကို တိုးသွားတဲ့လေအဟုန်နဲ့ တိုက်သွားတဲ့ လူတွေကြောင့်သာ သတိထားမိတယ်။
ကျနော့စိတ်ကတော့ အုတ်ခဲကျိုးရောင် ဘူတာရုံလေးမှာ ကျကျန်နေခဲ့တာ။
(ရောက်တတ်ရာရာ လျှောက်ရေးတာပါခင်ဗျာ..ပေါက်တတ်ကရတွေ တွေးကြဖို့ပါပဲ)
Posted by Anonymous at 2:38 PM 21 comments Links to this post
ညီရေ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ အရောင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လက်တည့်စမ်းထားတာလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာအနေနဲ့ ရေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ နောက်များမှ ရေးပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။
ကျနော့မှာ အရောင်စုံနဲ့ လက်သည်းနီပုလင်းတွေ မရှိတာမို့ ကင်မရာမှာပါတဲ့ user defined setting ထဲက WB shift/BKT Function သုံးပြီး အရောင်လေးတွေ ပြောင်းရိုက်ထားတာလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ အရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာတင် ခံစားချက်တွေပြောင်းသွားစေတတ်တာ ဒီအရောင်တွေရဲ့ ညှို့ယူနိုင်စွမ်းတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး အရောင်စုံ အရုပ်ကလေးတွေပါ....
Posted by Anonymous at 11:14 PM 34 comments Links to this post
သူပြောသမျှတွေ ပို့စ်လေးတွေအဖြစ် အသက်သွင်းခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အခုလည်း အဖြေသိပါလျက် စာဖတ်သူတွေရဲ့ အယူအဆတွေကို သူသိချင်ပါသတဲ့လေ….
ကိုယ်ပြောလည်းပြောချင်တယ် ပြောလို့လည်းမထွက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတစ်ပါးတွေရဲ့ အမြင်ကိုလည်း သိချင်တယ်။ ပြောတတ်သလိုပဲ ပြောပါတော့မယ်လေ…
ကိုယ် သူ့ကို စတွေ့တာ ထုံးစံအတိုင်း Date လုပ်တဲ့ website တစ်ခုမှာပေါ့။ သူ့ရဲ့ ဓါတ်ပုံ တစ်ခုအောက် မှာ ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့ comment တစ်ခုကနေ စခဲ့တာပါ။ ပြောရရင် ကိုယ်ကပဲ စခဲ့တယ်ဆိုရမှာ။
ဒီယုံမြင်လို့ ဒီချုံထွင်တယ်ပဲဆိုဆို comment နောက်ကနေ လိုက်လာတဲ့ သူ့ရဲ့ contact တစ်ခုကနေ ကိုယ်တို့ဆက်သွယ်ခဲ့ကြတယ်။ ကိုယ့်အထင် အဲဒီညက မနက်၂နာရီထိုးသွားခဲ့တယ်။ အဲ့အချိန်ထိ သူဟာ ကိုယ့်မိတ်ဆွေအဆင့်မှာပဲ။ သူက ပြောတယ် ကိုယ်နဲ့စကားပြောရတာ သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲတဲ့။ သူကပုံပြောသူတစ်ယောက်လား ကိုယ်က ပုံပြောသူတစ်ယောက်လား ဘယ်လိုမှကို မဆန်းစစ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ အမှတ်ရမိတာက အဲ့ဒီညဟာ မတ်လရဲ့ ပူအိုက်တဲ့ ညတစ်ညပါပဲ။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကိုယ်တို့ ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်ဆို ဒီခေတ်အမြင်နဲ့ကြည့်ရင် မစောလွန်းလောက်ပါဘူးနော်။ သူ့ကို ကိုယ် MRT မှာသွားခေါ်လာခဲ့တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို ငေးနေလိုက်တာများ ဒီအရပ်တွေအခုမှ ရောက်ဖူးတဲ့အရိုင်းအစိုင်းလေးလို။ မှေးမှေးမှိန်မှိန်လေးမို့ ဒါနဲ့ပဲ အကြင်နာပိုစေခဲ့လေသလား မစဉ်းစားတတ်ခဲ့ဘူး။
ကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်တော့ သူက တရင်းတနှီးရှိလွန်းနေပြန်တယ်။ ချိုသက်ခြင်း ခါးသီးခြင်းတွေနဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့။ အဲ့အချိန်ထိ သူ့ဟာ ကိုယ့်အတွက် သာမာန်မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်အဖြစ် စိတ်ထဲမှာ ရှိခဲ့သေးတယ်။
သူပြန်သွားပြီး မကြာမတင်မှာပဲ sms လေးတစ်ခု ၀င်လာတယ်။ သူကိုယ့်ကို ချစ်တယ်တဲ့။ ဟင့်အင်း မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒီအချိန်တိုလေးတစ်ခုအတွင်းမှာ သူကိုယ့်ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားပြောဖို့ မလွယ်ရဘူးလေ။ တစ်ကယ်ဆို သူကိုယ့်အကြောင်း သိသေးတာမှ မဟုတ်တာနော်။ ပြီးတော့ ကိုယ်လည်း သူ့အကြောင်းမသိသေးဘူးလေ။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတဖွဖွ ပြောတဲ့စကားက ကိုယ့်ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ ကိုယ်အမြဲပြန်ပြောဖြစ်တာက တကယ်ချစ်တာမဟုတ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်လည်း မင်းကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ။ ဒါပေမယ့် သူက မနားတမ်းဆက်ပြောနေတာပါပဲ။
နောက်တစ်ခေါက်ကိုတော့ အပြင်ဘက် တစ်နေရာမှာ တွေ့ဖြစ်ကြတယ်။ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ တော်တော်လေး ရင်းနီးသွားကြတယ်(ဒီ့ထက်ပိုပြီး ပြောစရာလိုမယ်မထင်ဘူးနော်)။ မနက်စာကို သူ့အတွက် Starbuck ဆိုင်မှာ ပဲ လိုက်ကျွေးဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုတိုက်တဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်က ချစ်ခြင်းတွေပါတယ်တဲ့။ ဒါသူ့အပြောပေါ့။ သူ့ကို ကိုယ်ရိုက်ပေးတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးကို သူ့မှာ ကြိုက်လှချည်ရဲ့ဆိုပြီး ထုတ်ထားလိုက်တာ ပုံတွေမှ အများကြီး။ သူ့မျက်နှာတစ်ခုပဲကြည်ပြီး နောက်ခံတွေ ၀ါးနေလို့တဲ့လေ။
နောက်တော့ သူ့အလုပ်က ရုံးပိတ်ရက်တွေပါ ဆင်းရတာမို့ ကိုယ်တို့မတွေ့ဖြစ်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် ညတိုင်းဖုံးပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့ ဓါတ်ပြားအဟောင်းကြီးကိုလည်း ဖွင့်နေလျက်ပေါ့။
အဲ့ဒီကြားထဲမှာ ကိုယ်အရင်တွဲနေလက်စ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ခေါက်လောက်တော့ တွေ့ဖြစ်ပါသေးတယ်။
မေလရဲ့ ပထမအပတ်နားမှာတော့ သူ့ဆီကို ကိုယ်ဖုံးခေါ်မိတယ်။ မကိုင်ပါလားလို့ နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် ကိုယ်ဆက်တော့ ကိုယ်မကြားဘူးတဲ့အသံတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ကိုယ်ဘယ်သူလဲတဲ့ သူကများ။ ကိုယ်ကမေးတယ် သူဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ သူ့သူငယ်ချင်းပါတဲ့ မင်းဘယ်သူလဲ ပြောပြပါလို့မေးလာတယ်။ ကိုယ်ဒေါသတွေထွက်နေမိတယ်။ ကိုယ့်ကို ဒီမေးခွန်းမေးရလောက်အောင် မင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ရင်းနှီးမှုကဘာတဲ့လဲ။ ကိုယ့်ဒေါသကိုယ် ထိန်းပင်မယ့် မရတော့ဘူး။
မကြာခင်မှာ သူဖုံးပြန်ဆက်တယ် ကိုယ်သူ့ကိုမေးတော့ သူငယ်ချင်းပါတဲ့။ ဒါဆို သူငယ်ချင်းဆို ကိုယ့်ကို ဒီမေးခွန်းမေးစရာလားဆိုတော့ သူက ရိုးရိုးသားသားသူငယ်ချင်းပါတဲ့။ အဲ့မှာ ကိုယ့်ဒေါသ ပိုဆိုးသွားတယ်။ ဒေါသနောက်တရားပါ ဘာတွေ ပြောနေမိမှန်းမသိအောင် ပြောပစ်ခဲ့တာ။
နောက်တော့ သူခေါ်တဲ့ ဖုံးတွေကို မကိုင်ခဲ့ဘူး။ ဆယ်ကြိမ်မကအောင် သူခေါ်ခဲ့ပင်မယ့် ကိုယ်မကိုင်ခဲ့တော့ဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သူမရှိအောင် အလုပ်တွေ ဖိလုပ်နေခဲ့တာ။
တွဲနေလက်စလူလည်း ဒီကို အလည်လာရင်း ကိုယ်နဲ့ဆုံဖြစ်တော့ ကိုယ်သူ့ကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးဖြစ်တယ်။ လူတစ်ယောက်က ငါ့ကို ညာရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ ဖြေရှင်းခွင့်ပေးသင့်သလားဆိုတော့ လူတစ်ယောက်မှာ second chance ရှိသင့်တယ်တဲ့လေ။
ဒါနဲ့သူခေါ်တဲ့ ဖုံးတစ်ခုကို ကိုယ်လက်ခံခဲ့တယ်။ နောက်တော့ ဒီတစ်ပတ်ရုံးပိတ်ရက် ရုံးမပိတ်ပင်မယ့် သူကိုယ့်ဆီရောက်အောင်လာမတဲ့။ အဲ့ဒီညနေတစ်ခုကတော့ စိတ်ထဲစွဲထင်စေခဲ့တယ်။ ညနေစာမစားရသေးတဲ့ သူ့ကို ကိုယ်ညနေစာလိုက်ကျွေးရင် ကိုယ်တို့ တံတားတစ်ခုဆီကို ဦးတည်ခဲ့ကြတာပေါ့။ ညနေကပဲ လှသလား တံတားကပဲလှသလား ကိုယ့်အတွက် လှပခဲ့တာသေချာနေခဲ့တယ်။ ကိုယ်တို့ ဓါတ်ပုံတွေတွဲရိုက်ခဲ့ကြတယ်။
ပြီးတော့ ကိုယ်သူ့အတွက် အမှတ်တရလက်ဆောင် အင်္ကျီတစ်ထည်ကိုပေးရင်း ကိုယ်သူ့ကိုယ်ချစ်မိသွားပြီလို့ ပြန်ပြောခဲ့မိတယ်။ ကိုယ့်အတွက်တော့ သူ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားပြောဖို့ တော်တော်လေး စဉ်းစားခဲ့ရတာပါ။ သူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်း အဆက်အသွယ်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒီစကားလုံးတွေနောက်ကို ကိုယ်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မေလရဲ့ နောက်ဆုံးအပတ်နားမှာတော့ သူကိုယ့်အိမ်ကို လာမယ်ပြောရင်း ရောက်မလာခဲ့ဘူး။ သူသုံးနာရီလောက်ရောက်မယ်ပြောလို့ ကိုယ့်စောင့်ရင်း အဲ့ဒီညနေဟာ သိပ်ရှည်လျားလွန်းခဲ့တယ်။ မစောင့်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာ Musical school ရဲ့ ဒေါင့်တစ်နေရာမှာ ကိုယ်ဟာ တစ်စုံတစ်ရာကို မျှော်လင့်စောင့်စားခဲ့ရတာ။ အသံမမြည်တဲ့ဖုံးလေးတစ်ခုက လက်ထဲမှာ အသက်မဲ့စွာ။ ဖုံးဘေးနားက ကြိုးတွေ ပြတ်သွားအောင် ရမ်းခါရင်း ဖုံးကိုပဲ မဲနေမိတော့တာ။
သူအဲ့ဒီတစ်ညလုံး ရောက်မလာခဲ့ဖူး။ နောက်နေ့မနက်ရောက်တော့ သူ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာ အိပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့။ အချိန်မတိကျလိုက်တာလို့ မလာနိုင်လည်း မလာနိုင်ကြောင်းပြောပါတော့လား။ ကိုယ့်ကို မလေးမစားဆက်ဆံတယ်ပြောရင်းက နောက်မှ ပြန်ဆက်မယ်ဆိုပြီး ဖုံးကိုချသွားခဲ့တယ်။ ရက်စက်လိုက်တာလို့ အော်မြည်ရင်း ရင်ဘတ်ကို ဖိမိတယ်။ နာကျင်လှချည်လို့ ငိုကြွေးနေမိတာပေါ့။
ဖုံးဆက်နိုးနဲ့ မျှော်မိလည်းအလကားပါပဲ။ နောက်တပတ်အင်္ဂါနေ့တစ်ရက်မှာတော့ ကိုယ်သူ့ကို ဖုံးဆက်တော့ သူက သူ့မှာ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိနေပြီတဲ့။ မြန်လှချည်လား။ အဲ့ဒီချစ်သူနဲ့ အဝေးတစ်မြေကိုသွားတော့မှာတဲ့။ သူ့ကို ကြိုးစားပြီးမေ့လိုက်ပါတဲ့။ ကိုယ်က သူ့အပေါ် အမြဲတမ်း အထက်စီးက အနိုင်ကျင့်ဆက်ဆံသတဲ့လေ။
သူရဲ့ချစ်သူဆိုတာ ဟိုတစ်လောက ကိုယ့်ကို ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဖုံးထဲမှာ မေးတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုချစ်တယ် ချစ်တယ် တဖွဖွပြောတဲ့သူတစ်ယောက်က ကိုယ့်နောက်ကွယ်မှာ နောက်ထပ်ချစ်သူတစ်ယောက်နဲ့ လျှောက်သွားနေတော့တာကိုး။ ကိုယ်ဘယ်လို နှလုံးသားနဲ့လက်ခံရမှာလဲ။ ဒါဆို သူကိုယ့်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာကကော….
လက်လွတ်စပယ် မဆုံးဖြတ်ပဲ တကယ့်ချစ်ခြင်းကို နှလုံးသွင်းမိတဲ့ ကိုယ်။ အရူးတစ်ပိုင်းပါပဲ။ သေမတတ် အနေခက်လွန်းလို့ ဒီဘ၀ကိုဇွတ်သိမ်းပစ်မယ်လည်း ကြံမိပြန်တယ်။ ပစ်ပြေးသူက မေ့နိုင်ပေမယ့် ဒီတစ်ဖက်မှာတော့ မမေ့ရက်နိုင်သေးဘူးလေ။
ဝေဒနာတွေအပြည့်နဲ့ ဒီဘ၀မှာ ကိုယ်မပျော်နိုင်တော့ဘူး။
မေ့ပစ်ပါဆိုပေမယ့် ကိုယ်က ဒီအိပ်မက်မှာ ပျော်ပိုက်နေမိပြီလေ။ သူပြန်လာမယ်ဆို လက်ကမ်းလို့ကြိုချင်နေမိတယ်။
ဒီ ပုစ္ဆာမှာ အဖြေက မေ့ပစ်သင့်သတဲ့လား။ ကိုယ်ရော မှားခဲ့မိသလား။ ပြန်လာချိန်ကို မျှော်နေမိတဲ့ ကိုယ့်မှာ အပြစ်ရှိသတဲ့လား။
ကျနော့ စာဖတ်သူများ ဆွေးနွေးပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ အပြုသဘောဆောင်သော အကြံပြုချက်များ ပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Posted by Anonymous at 12:18 AM 48 comments Links to this post
မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို တောင်းဆိုမိပြန်ပါပြီ……စိတ်ဆိုတာလည်း အခက်သားလား
Posted by Anonymous at 3:46 PM 22 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 12:08 PM 13 comments Links to this post
တစ်ခေါက် နှစ်ခေါက် သုံးခေါက်
ငယ်တုန်းက ဆော့ခဲ့ဖူးတာလေး ကို တွေးနေမိလို့ပါ
Posted by Anonymous at 4:17 PM 15 comments Links to this post
ရပ် ရပ်သွားတဲ့ နှလုံးသားကို
တားလို့ မှ မရပဲ
ဇာတိ မရဏ ဗျာပါဒ
Posted by Anonymous at 11:26 AM 16 comments Links to this post
ဒီအကြောင်းကို ရေးဖို့ တကယ့်ကို ချီတုံချတုံ ဖြစ်ရပါတယ်။ TAG တွေကို တာဝန်တစ်ခုလိုပဲ တတ်နိုင်သလောက် မြန်မြန်ရေးပေးနေကြလေ။ ကျနော်က အိမ်စာပါရင် မနေတတ်ဘူးခင်ဗျ။ ဒီပို့စ်ကို ရေးဖို့တော့ အတော် တွန့်ဆုတ်ပါတယ်။ ရေးဖို့ မရေးဖို့ ချိန်ဆရင်း တောင်းဆိုသူကလည်း အလေးထားရတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်မို့ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ…..
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်က ဆူးတစ်ပင်အကြောင်းပါ။ ဆူးတစ်ပင်လုံးကို သူကိုယ်တိုင်ပဲ စိုက်ပျိုးမိခဲ့တာ။ အခုတော့ အမှတ်တရပေါ့…………………………………….
ကျောင်းစတက်တဲ့ သူငယ်တန်းမှာ သူ ဒုတိယဆု ရခဲ့တယ်။ နေကြာပန်းတံဆိပ်စောင်လေးတစ်ထည်၊ ရွှေဝါဆပ်ပြာ နှစ်တုံး၊ စက်မှု ၁ ထုတ် ကြွေ ပန်းကန် အ၀ါရောင် တစ်ချပ် ပြီးတော့ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ။ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနာမည်က ဒေါ်သိန်းသိန်းဆွေ။ အခုအထိ အဲ့ဒီ နေကြာပန်း စောင်ကလေး ရှိသေးတယ်။
မေကပြောတယ် ဘာကြောင့် ပထမ မရသလဲတဲ့။ ငါ့သိက္ခာကျသတဲ့။ သူများလည်း ထမင်းစားတယ် နင်လည်း ထမင်းစားတယ်။ ဘာကြောင့် သူများရတဲ့ ပထမ နင်မရခဲ့သလဲ။ ဝေးပါသေးတယ် ဒါနဲ့များ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်သတဲ့။
ဆတ်ဆတ်ခါနာတဲ့ စိတ်နဲ့ ဆူးတစ်ပင်ကို စပျိုးခဲ့မိတာ။
နောက်တစ်နှစ်ကနေစပြီး နှစ်တိုင်းကို မခံချင်စိတ်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့တာ။ သူက စကားလုံးတွေရဲ့ ထိရှမှုကို နှလုံးသားနဲ့နာကြားခဲ့တာ။ စကားလုံးတိုင်းကို အခုထက်ထိမှတ်မိနေအောင် နာကျင်ခဲ့ရတာပါ။
လေးတန်းနှစ်မှာ ဆူးပင်ပိုမိုရင့်သန်စေခဲ့တယ်။ အဲ့အကြောင်းကို ဒီမှာရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖေနဲ့မေက သူ့ကို ကတိတစ်ခုပေးခဲ့ဖူးတယ်။ သူက ကတိတွေပေးပြီး လုပ်မပေးခဲ့ရင်လည်း မကြိုက်တတ်ပါဘူး။ သူတို့အလိုဆန္ဒတွေကို နှစ်တိုင်းဖြည့်နိုင်ခဲ့ရင် အဲ့ဒီ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာတွေကို အသေအချာ ဘောင်ခတ်ပေးမတဲ့လေ။ ဒါပေမယ့် ယနေ့ထက်ထိ ယနေ့ထက်ထိ လုပ်မပေးခဲ့ကြပါဘူး။ သူ မကျေမနပ်ပြောတိုင်း အခုထိ မမေ့နိုင်သေးပဲကိုးဆိုပြီး ရယ်မောပစ်လိုက်ကြတယ်။
အထက်တန်းကျောင်းမရှိသေးတဲ့ စက်ရုံမြေမှာမို့ ကိုးတန်းကိုတော့ အထက်မင်းလှအထက်တန်းကျောင်းကို ပြောင်းခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ရွာကြက်ဖ သူများရွာ ကြက်မတဲ့။ နှိမ်လိုက်ကြတာလည်း မပြောပါနဲ့တော့ဗျာ။ အစမ်းစာမေးပွဲ အမှတ်တွေ မထွက်ခင် အထိပေါ့။ အမှတ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက် မုန်းတီးတဲ့ မျက်လုံးတွေကို နေ့တိုင်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ အခန်းဝင်ဝင်ချင်း ဒေါင့်စွန်းမှာ ထိုင်တာမို့ လွယ်အိတ်နဲ့တစ်မျိုး စကားနဲ့တစ်သွယ် မျက်စောင်းနဲ့အမျိုးမျိုး ရန်စသွားခဲ့ကြတာ။ သူများရပ်ရွာ ကျောင်းတက်ရတာလည်း ဆူးပင်ကို ရင့်သန်စေခဲ့တာပါပဲလေ။
ကိုးတန်းစာမေးပွဲမဖြေခင် သင်္ချာဆရာမ ဒေါ်အေးအေးကျော်က သူ့ဇာတိမုံရွာမှာ ဆယ်တန်းတက်ဖို့ အိမ်ကို တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ဆယ်တန်းကို သူ့ဇာတိမြို့မှာ တက်ခဲ့ရပြန်တယ်။ မေက အထက ၁ ထွက်မို့တစ်ကြောင်း၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်း သူ့ကို ငယ်ကတည်းက ထိန်းကျောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးဆန်းဖြစ်တာတစ်ကြောင်း အထက ၁မှာ ထားမယ်ပြောတယ်။ အဒေါ်အကြီးဆုံးကတော့ သူလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ အထက ၃မှာပဲ ထားရမယ်တဲ့။ လက်ရှိသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တက်နေတဲ့ ၀ိုင်းက အထက ၂၀ိုင်း။ တော်သေးတယ် သုံးကျောင်းပဲရှိလို့။ တက်ဖြစ်ခဲ့တာ အထက ၃ပါ။
သူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆရာမ အသိုင်းအ၀ိုင်း။ အတန်းထဲ ၀င်သမျှ ဆရာဆရာမတွေက သူ့နာမည်ကို မသိဘူး။ ဘယ်သူ့သားလေး ဘယ်သူ့တူလေး ထပါဦးဆိုပြီး စာမေးတော့တာ။ လူလည်ခေါင် အရှက်မကွဲချင်တာနဲ့ ကျက်လိုက်ရတဲ့ စာတွေ။ နေ့လည် အိမ်ပြန် ထမင်းစားရင် ပန်းကန်ရှေ့ချပြီးတော့ ကို ကျက်ခဲ့ရတာ။ ကျောင်းပြန်တက်ရင် ဖြေရဦးမှာလေ။
စာမေးပွဲကြီးနီးလာတဲ့ ဆောင်းတွင်းတစ်ခုမှာပဲ BIO ဆရာမအိမ်မှာ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သူစာမေးပွဲဖြေဖို့ သီးသန့်ဝယ်ထားတဲ့ စာရွက်တွေကို သူငယ်ချင်းတွေက သုံးပစ်ခဲ့ကြတယ်။ စိတ်ဆိုးလွန်းမက စိတ်ဆိုးပြီး စာမေးပွဲမဖြေပဲ အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ နောက်တော့ အဲ့ဒီစာသင်ဝိုင်းက ထွက်ပစ်ခဲ့တဲ့အထိ။
နောက်တော့ နီးစပ်ရာ ဆရာတွေက ဟိုဝိုင်းလာပါ ဒီဝိုင်းလာပါခေါ်ကြပေမယ့် ၀ိုင်းခေါင်းဆောင် အတန်းသားတွေက သူ့ကိုလက်မခံကြဘူးတဲ့။ အဆိုးဆုံးဝိုင်းကဆို သူ့ကို လက်ခံရင် သူတို့ ဒီဝိုင်းက ထွက်ပါမယ်ဆိုပဲ။ သူ့အတွက် ဆူးပင်ကြီးကို အကြီးကြီး ဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့။ သူရဲ့ စိတ်က သူ့ကို ကြည်ဖြူစွာ လက်သင့်မခံတဲ့ အရပ်ဆို တစက္ကန့်တောင် မနေချင်ခဲ့ဘူးလေ။
ပြီးတော့ အဲ့ဒီနှစ်က သူ့ကျန်းမာရေး။ မေ့ဆီက အမွေကို သူမတောင်းပဲ ရခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ အိပ်ဆေးတွေနဲ့ အဲ့ဒီဆေးတွေသောက်ရင်း ဒီနှစ်ကို မုန်းတီးနေခဲ့မိတယ်။ သူ့ကိုယ့်သူ သိလို့မဖြေပါရစေနဲ့ဆိုတော့ မေက အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးက နောက်တစ်နှစ်ကျောင်းမထားနိုင်တော့ဘူးတဲ့။ ကဲ………
ရသလောက်အမှတ်ကလေးနဲ့ နှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ သူ သူ့ပြိုင်ဘက်တွေကို အရှုံးမပေးချင်ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ရန်ကုန်မြေကို ခြေချခဲ့တယ်။ နယ်မှာ မရှိသေးတဲ့ ကွန်ပြူတာသင်တန်းကို တက်ခဲ့တယ်။ မြန်မာ့ကွန်ပြူတာ စင်တာဆိုတဲ့ အရပ်မှာပါ။ ယောင်လည်လည် တောသားလေးမို့ အားလုံးကအထင်သေးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနှစ်မှာ သူဆုရခဲ့ပါတယ်။ ရခဲ့တဲ့ ဆုက နောက်တစ်နှစ်သင်တန်းကြေးပေါ့။
သူနေတဲ့ အိမ်က သူ့ကိုပြောတယ် NCC သင်တန်းမှာ ဂုဏ်ထူးရဖို့ အတော်ခက်သတဲ့။ နင်လိုလူမျိုး ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ တော်တော်ကို ထူးချွန်မှ ထက်မြက်မှတဲ့။ ဆူးတွေကို ချွန်အောင်လာသွေးနေကြ ပြန်တယ်။ နောက်တစ်ခေါက် သင်တန်းမှာ ဆုထက်ရပြန်တော့ ဆူးပင်ကို ချိတ်မိပြန်ရော။ IDCS ဆိုတဲ့ ခြေလှမ်းကို စလှမ်းမိပြန်ရော။ နေတဲ့ အိမ်က ကောင်းချီးပေးပါတယ်။ အကျနာမယ်တဲ့။ အဲ့ဒီ IDCS သင်တန်းတွေ ဆုံးတဲ့အထိ ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ကြေး သူရခဲ့တယ်။ အတန်းဆုံးအောင် တက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
IDCS သင်တန်းတက်ပြန်တော့လည်း သင်္ချာဆရာက သင်ရိုးစာအုပ်အစား ရှေ့ batch က the whole burma တစ်ယောက်ရဲ့ စာအုပ်ကို ကိုင်တယ်။ အဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ မတူရင် အဖြေမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုပဲ။ သူက လက်မခံဘူးဆိုတော့ ဆရာက ပြောတယ် အဲ့ဒီ ကောင်မလေးက ၉၃မှတ်နဲ့ လက်ရှိ အမှတ်အများဆုံးရထားတဲ့သူတဲ့။ ဒါနဲ့ လက်ခံရရောလား။ ဆူးတွေကလည်း များလှချည်လားကွယ်ရို့။ သူသိပ်ကြိုက်တဲ့ သင်္ချာကို ၉၅ မှတ်ရအောင် ဖြေပြီး ဆူးပင်ကြီးကို ဘွားခနဲပြခဲ့ဖူးတယ်။
သူနောက်ထပ်ကျောင်းတစ်ခု အပြိုင်တက်ရပြီဆိုတော့ သူ့မှာ ဆူးပင်ကြီးကို ကြည့်မနေအားတော့ပါဘူး။ ကျောင်းနှစ်ကျောင်းကြားမှာ ဆူးတွေကို မေ့နေခဲ့ပြီလေ။ နှစ်ကျောင်းလုံး အောင်ဖို့အရေးထက် ဆူးပင်ကြီးက အရာမတွင်တော့ဘူးပေါ့။
သူအခု ဆူးတွေကို မေ့ပျောက်နေခဲ့တာ ကြာလှပြီ။ ဆူးပင်ကြီးရဲ့ အရိပ်နဲ့ ဆူးတွေကို မေ့နေခဲ့ပြီလေ။ အခုတော့ ဆူးတစ်ပင်အကြောင်း အမှတ်တရပါ………..
Posted by Anonymous at 11:24 PM 17 comments Links to this post
အတွေးတွေက မဆုံးနိုင်ဘူး။ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စထဲမှာ…..
ဘာတွေကိုတွေးနေမိခဲ့သလဲ တွေးနေရင်း အတွေးတွေ ပတ်ချာလည်နေပြန်တယ်
အသံကြားတာနဲ့ MC ယူချင်နေမိတာ
ဟိုင်းဝေးလမ်းခရီးက ကျန်းမာရေးဆိုတာကို သတိရပြီး ပြုံးမိပြန်ရော
သာကေတက ကားမှတ်တိုင် မဟုတ်ဘူးနော်
တစ်အုပ်ထဲပါပဲ ဖတ်လို့မ၀သေးဘူး။ မဆုံးတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်စေချင်မိတာ မှားသလား
စိတ်ရောက်နေတဲ့ နေရာက တစ်ခုတည်း
တကယ်ရေးချင်တဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုက ဖွင့်လက်စ
အသံတစ်ခုတည်းပါ စက္ကန့်မခြား ကြားနေချင်မိတာ
ညဖက်အိပ်ချိန်တွေ (အိပ်ကို အိပ်ရမယ်လို့ ဘယ်သူသတ်မှတ်ခဲ့တာလဲ)
ငါ့မှာတော့ အရာအရာတိုင်းအတွက် ရင်ဘတ်ကြီးဖွင့်လို့
ခပ်ထူထူ ခပ်အအ ခပ်နန ခပ်နုံနုံ ကိုယ်လိုလူ (အဖြေမှန်သိလျက်နဲ့ ဒါမှားတယ်ဆိုရင်တောင် ယုံပါတယ်)
မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း မေ့ပျောက်နိုင်စွမ်း (တစ်ချို့အရာတွေ လေးလံလွန်းတယ်)
အရာအားလုံးနောက်က မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေ (မရှောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလေ)
စွဲလန်းစေတဲ့အရာတွေပါ လောလောဆယ် သေချာတာက အပြာရောင်ပါ
လိုအပ်တဲ့အရာက အနားမှာ ရှိမနေနိုင်ဘူးတဲ့ (အနားမှာ နေချင်တယ်လည်းဆိုပါလျက်....)
မရှိခြင်းဆိုတဲ့ စကား မကြားပါရစေနဲ့
မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့ အငြင်း မငြင်းပါရစေနဲ့
ငါ့ကိုဖုံးခေါ်ပါ၊ ထပ်တလဲလဲပြောပါ ငါကြားချင်လို့
ပေါက်တတ်ကရတွေ ရေးခဲ့တယ် ဆိုတာ ရိုးသားစွာဝန်ခံပါရစေ……………….
ကိုအောင်သာငယ်နဲ့ မကြေးမုံမှ ပြိုင်တူ TAG ၍ ရေးရပါသည်....
Posted by Anonymous at 12:36 AM 24 comments Links to this post
ငါ အပြာရောင်တွေကို မက်မောတယ်
တကယ်တော့ အပြာရောင်အိပ်မက် တစ်ခုသက်သက်ပဲ.......
Posted by Anonymous at 4:30 PM 22 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 1:03 PM9comments Links to this post
နှိပ်စက်တယ်မထင်ကြပါနဲ့ဗျာ အလွမ်းပြေ ၂ တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုထားလို့ပါခင်ဗျာ
Posted by Anonymous at 12:33 PM 25 comments Links to this post
အသားမကျ နေသေးတဲ့ ဒီအကြွေစေ့တွေ…………………….
တရင်းတနှီးရှိခဲ့ပါလျက် အခုအချိန်ထိ အကြွေစေ့တွေနဲ့ ဝေးကွာနေတုံး။ ဘာလို့များပါလိမ့်ပဲ ……..
ကျောင်းစတက်ရတော့ ကျနော်ရတဲ့ မုန့်ဖိုးက ၂၅ပြား။ အကုန်သုံးခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ဆယ်ပြားတစ်ရက် ဆယ့်ငါးပြားတစ်ရက် တစ်လှည့်စီ စုဗူးထဲ မထည့်မနေရ။ စုဗူးဆိုတာကလည်း တရုတ်ကလာတဲ့ အအေးသံဗူးလေးပါပဲ။ ဆယ်ပြားရတဲ့ ရက် မန်ကျည်သီးလှော်ထုပ်လေးကိုင်ရမလို ဖွဲနုမုန့်လုံးလေးတွေပဲ ၀ယ်ရမလိုပေါ့။ ဆယ့်ငါးပြားရတဲ့နေ့ဆို အန်တီရွှေကြီးဆီက အုန်းနို့မုန့်လက်ဆောင်းအေးအေးလေး ဒါမှမဟုတ် အုန်းသီးသာကူမုန့်ဖက်ထုပ်ဆီကို ခြေလှမ်းမိစမြဲ။
ကျောင်းပိတ်ရက်စနေ တနင်္ဂနွေတွေဆို တစ်ရက်မဟုတ်တစ်ရက် စုဗူးထဲလက်နှိုက်ပြီး ရှိသမျှ အကြွေစေ့ထုတ်။ လက်တွေလည်း မည်းလို့။ ပြီးရင်တော့ စုထားတာ ဘယ်လောက်ရှိပြီ အင်းတွေးနေရင်း သူဌေးတောင် ဖြစ်မလိုလို။ နှစ်ထပ်စေ့လေး၊ မတ်စေ့အသစ်ကလေး၊ ရှေးဟောင်းစေ့လေး၊ ဘယ်ဟာက ဘယ်လိုနဲ့ ပျော်လို့။ မကြာပါဘူး နွေကျောင်းပိတ် မပြီးခင်မှာ စုဗူးက ခါလီပြန်ဖြစ်စမြဲ။ လွယ်အိတ်ဝယ်ဖို့ ဖိနပ်ပါးလို့ စာအုပ်များအတွက် စသည် စသည်ပေါ့။
အလယ်တန်းရောက်တော့ ငါးမူးပဲရခဲ့သေးတာ။ ရှစ်တန်းရောက်တော့ အကြွေစေ့တွေနဲ့ နေ့တိုင်းမတွေ့ဖြစ်တော့ဘူး။ မုန့်ဖိုးက တစ်ကျပ်စရပြီကိုး။ နောက်ပိုင်းအကြွေစေ့ဗူးလေးကို အမှတ်တရ သိမ်းထားခဲ့တယ်။ နယ်အိမ်မှာ အခုအထိ တစ်ဗူးရှိနေဦးမယ်။
အကြွေစေ့အသုံးတွေ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့။ တစ်လောက ငါးဆယ်တန်စေ့ တစ်ရာတန်စေ့တွေ ပေါ်ပင်မယ့် ခဏတစ်ဖြုတ်ပါပဲ။ အကြွေစေ့ယဉ်ကျေးမှုက ပျောက်ဆုံးနေဟန်တူရဲ့။
မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ရှိနေတဲ့ အကြွေတွေကို စတွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူတစ်စိမ်းဆန်လွန်းသလိုပဲ။ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကို ထည့်ရင် လေးနေသလားလို့။ ဒီမှာကလည်း အကြွေတွေက ဟောတစ်ဆုပ် ဟောတစ်ဆုပ်။ အသိမ်းအထုပ်ကောင်းတာ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်လိုက်တိုင်း အိမ်ပြန်မပါဘူးလေ။ ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်ပြန်တော့ ထိုင်ရာကထရင် ဘယ်နားလှိမ့်နေခဲ့တယ် မသိပြန်ဘူး။ လက်ထဲမှာ ကိုင်ရင်း စားပွဲပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့ပေါင်းလည်း မရေမတွက်နိုင်တော့။
အဲဒီတော့ ပါလာသလောက် အကြွေစေ့တွေကို အိမ်မှာ ဗူးတစ်ခုတည်း ပစ်,ပစ်ထည့်နေမိတယ်။ လကုန်ပိုင်းလောက်ဆို အဲ့ဗူးလေးက ကျနော့မနက်စာလေးတွေပေါ့။ အကြွေစေ့တွေထဲက ၁ကျပ်စေ့ ငါးမူးစေ့ ပြားနှစ်ဆယ်စေ့လေးတွေထုတ်ပြီး မနက်စာစားနေကြလေ။
အရင်တုံးကတော့ ရုံးက တရုတ်မက သူ့တူတွေ တူမတွေ မုန့်ဖိုးပေးဖို့ အကြွေလဲနေကြ။ အခု သူအလုပ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက် မနက်စာအသွင်ပဲပြောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ ထမင်းဆိုင်က တရုတ်မကလည်း ကျနော့လက်ထဲ အကြွေတွေမြင်ရင် လဲပါ လဲပါချည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။
စိတ်ထဲလည်း အကြွေတွေကို ရှုပ်တယ်ပဲထင်နေမိတယ်။ ဘယ်တော့မှ သွားလေရာမှာ အကြွေမဆောင်တတ်ဘူးလေ။ လေးတာရော အသံမြည်တာရော စုံလို့ပေါ့ဗျာ။
အကြွေမဆောင်တတ်ဘူးဆိုမှ ဟိုတစ်လောက ကားပေါ်မှာ အကြွေလိုက်လဲနေရှာတဲ့ သူကိုလည်း တွေ့ဖြစ်သေးတယ်။ ကျနော်လည်း ကဒ်မပါလာလို့ကတော့ အဲ့လိုလိုက်လဲနေရမှာပါလား တွေးမိပြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် အကြွေဆောင်မယ်လို့တော့ အခုထိ စိတ်ကူးမရှိသေးဘူးဗျ။
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ နှိပ်စိ အိတ်လေးနဲ့ တစ်မျိုး၊ ရှုံ့အိတ်ကလေးတွေနဲ့က တစ်သွယ် ပုံစုံအဖုံဖုံနဲ့ အကြွေတွေ သယ်ဆောင်ကြလေတယ်။ ကျနော်ကတော့ အခုထက်ထိ အကြွေတွေနဲ့ဝေးကွာနေဆဲ။
ငယ်ငယ်တုန်းက မက်မက်စက်စက် ကိုင်တွယ်ရေတွက်ဖူးတဲ့ အကြွေတွေ ဘာကြောင့်များ အခုမှ စိမ်းကားနေမိသလဲ။ အရင်းနှီးလွန်ခဲ့လို့များလား။ ဒါမှမဟုတ် အကြွေခေတ်ပဲ ကျော်လွန်ခဲ့လေသလား။ အကြွေတွေကို ကျနော်လက်မခံနိုင်တော့တာလား။ နှစ်ထပ်စေ့မဟုတ်လို့များလား။
အိမ်ကအကြွေပုံးကတော့ လခထုတ်ရက်ဆို သူ့ကို ဂရုစိုက်မယ့်သူမရှိ။
photo credit to Ko Phone...
Posted by Anonymous at 12:17 AM 40 comments Links to this post